प्रदेश न १ को कर सम्बन्धि एक कार्यदल गठन - Saptakoshionline
प्रदेश न १ को कर सम्बन्धि एक कार्यदल गठन
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र २२, २०७४ समय: १२:०३:१६
विराटनगर÷ प्रदेश न १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्राध्यापक डा. प्रमोदकुमार झाको संयोजकत्वमा कर सम्बन्धि एक कार्यदल गठन गरेको छ ।
सदस्यहरुमा प्राध्यापक डा. अर्जुन बराल, श्री नारायण बास्कोटा, प्रतिनिधि उद्योग बाणीज्य महासंघ प्रदेश न १ , प्रदेश न १ को प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यलयका प्रतिनिधि, राजस्व तथा आर्थिक महाशाखा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रमुख , बजेट तथा योजना महाशाखाप्रदेश न १ का सदस्य सचिब , शाखा अधिकृत , राजस्व तथा आर्थिक नीति महाशाखाका प्रतिनिधि रहने प्रदेश न १ का आर्थिक योजना मन्त्री ईन्द्र आङबोेले जानकारी दिए।
उनिहरुको काम करको दायरा फाकीलो बनाउने दारा फराकीलो बनाउने बिषयमा पहिचान गर्ने हुने छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले डा. रमेश अधिकारीको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । सदस्यहरुमा डा .रमेश दाहा, डा. कृष्ण अग्रवालको रुपमा मनोनयन गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समीतीको संयोजकहरुको तर्फबाट ईलाम जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक गणेश बराललाई नियुक्त गरीएको छ । परामर्श समीतीे समग्र प्रदेशको आर्थिक , बित्तिय र राजस्व सम्बन्धि संरचना , करका दरहरु , राजस्वनिति तथा कार्यक्रम आर्थिक मामिला योजना मन्त्री समक्ष सिफारीस गर्ने काम हुने छ ।
प्रदेश सरकारले आगामि तिन महिनाकालागी बनाईने बजेट तथा निती योजनाका कार्यक्रम सर्वजनीक गर्ने तयारी गरेको मन्त्री आङबोले जानकारी दिए ।